Izindaba - Plant industrial air conditioning izixazululo
Ifekthri ayiseyona indawo engcono kakhulu yeminyango yokukhiqiza nokucubungula emcabangweni wendabuko, kodwa indawo ebanzi ehlanganisa ezokuphatha, i-R & D, ukukhiqizwa, ukugcinwa, ukugcinwa kwempahla, ukwamukela, ihhovisi, indawo yokudlela, impahla, indawo yokupaka nezinye izindawo. Ngakho-ke, izidingo zokujikeleza komoya nokunethezeka ziphakeme, ngakho-ke amafekthri amaningi nezindawo zokusebenzela zokuhlanza zizosebenzisa isimo somoya sezimboni zezitshalo, ukuze kuxazululwe lezi zinkinga futhi kwandiswe ukusebenza kahle komsebenzi.
Indawo esihlala kuyo igcwele uthuli namagciwane. Lawa ma-microorganisms anezidingo eziphezulu zemvelo. Ezikhungweni eziningi zokucwaninga nge-microbial, uhlelo lokuhlanza lwe-air conditioning yezimboni lwezitshalo luthandwa ngabacwaningi. Lawa ma-microorganisms akhona yonke indawo. Singase singazizwa lutho ngezikhathi ezivamile, kodwa lapho umzimba wethu usunesifo noma ubuhlungu, amagciwane asemoyeni angase abulale. Kodwa-ke, kunezinto eziningi ezingenziwa kuphela ngaphansi kwesimo sokungenalo uthuli kanye ne-aseptic. Isibonelo, amaphrojekthi okuhlanza adinga ukufaka ama-air conditioner okuhlanza amazinga angaphezu kuka-10000.
1. Isixazululo se-air conditioning yasefekthri: iyunithi ye-centrifugal ephezulu yokusebenza kahle + iyunithi yekhoyili yabalandeli
2. Izinzuzo zesixazululo se-air conditioning yefekthri:
1. Njengoba isitshalo sinezidingo eziphezulu zomthamo wesiqandisi, ukuphepha, ukwethembeka kanye nokusebenza kahle kwamandla, kunconywa ukuthi ukhethe iyunithi ye-centrifugal esebenza kahle kakhulu noma i-screw chiller;
2. Ezimbonini ezinkulu nasezinkundleni zokuxhumana, amandla okupholisa ayalahleka ngokushesha, futhi izindleko zokusebenza zibe phezulu kakhulu. Kunconywa ukukhetha i-cooler yamanzi enezindleko eziphansi zokusebenza.
3. Izimo okufanele zihlangatshezwe yisikhungo sesitshalo se-air conditioning solution:
1. Iyunithi ye-centrifugal ihlanganisa indawo enkulu futhi idinga ukulungisa indawo evulekile ukuze ifakwe.
2. Isitshalo sizohlinzeka ngendawo ethile yokubeka amakhabethe apholile ngamanzi, futhi kufanele kube nendawo eyanele yokubuyisela umoya, futhi indawo yophahla lwepayipi yomoya obandayo izohlinzekwa.
Isikhathi sokuthumela: Aug-02-2021